December | 2011 | Somaliland.Org
Monthly Archives: December 2011	News
Xoghayaha Guud ee IGAD Oo ka hadlay waxyaabaha urur-goboleedkoodu ka taageeri karo Somaliland
December 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xoghayaha guud ee urur goboleedka IGAD Md. Maxbuub Macalin oo maanta sheegay inay dawlada Somaliland kala hadlayaan mashaariicda urur goboleedkaasi ka taageeri karo dalkan. Xoghayaha guud ee IGAD, wuxuu sidaasi ka sheegay markii uu maanta soo gaadhay caasimada Hargeysa oo uu socdaal shaqo ku yimid markii sadexaad. Md. Maxbuub Macalin oo markii uu […]
December 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Xisbiga mucaaridka ah ee UDUB ayaa qarka u saaran inuu burburo ka hor inta aan la gaadhin doorashada Goleyaasha deegaanka ee lagu wado inay dalka ka qabsoonto horaanta sanadka 2012-ka, waxaana xisbigaasi u kala qeybsamay garabo iska soo horjeeda oo ku hirdamaya murashaxnimadda Madaxweynaha UDUB.
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland oo ka warbixiyay Natiijada socdaal ay ku tageen dalka Masar
December 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Weftigii Wasiirrada Arrimaha dibada iyo Madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo socdaal qaatay muddo laba todobaad ah socdaal shaqo ku joogay dalalka Kenya iyo Masar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaanay ka warameen kulamadii ay la yeesheen masuuliyiin ka tirsan dawlada Qaahira.
“Guddoomiyahayagu kumuu hadlin afkii Gudidayada, xaqna uma lihin inaanu waydiino Wasiirka”
December 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Xildhibaan Xariir Siciid Bulaalle oo ka tirsan Gudida xanaanada xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa naqdiyay Gudoomiyaha Guddi hoosaadkooda Md. Siciid Maxamed Cilmi oo wasiirka macdanta iyo biyaha ku eedeeyay inuu sifo sharci darro ah dalka uga raray sadex markab oo macdan ah. Xildhibaan Xariir Siciid Bulaalle oo maanta u […]
Xukuumadda Somaliland Iyo Arrimihii u weynaa ee fulay sanadkan sii galbanaya ee 2011-ka
December 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland waxa sanadkan sii galbanaya ee 2011-ka ay fulisay waxqabad balaadhan, waxaanay ka dhabaysay balan qaadyado badan oo ka mid ahaa waxyaabihii xisbiga KULMIYE uu ummadda fagaareyaasha uga balan qaadi jiray ee la xidhiidhay horumarinta, waxbarashada, siyaasadda dibadda iyo arrimo badan oo kale.
Wasiirka Hawlaha guud oo ka waramay waxyaabihii u qabsoomay sanadkan 2011-ka
December 30, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka wasaarada hawlaha guud,gaadiidka iyo guryaynta Somaliland Prof. Ismaaciil Muumin Aare ayaa galabta soo bandhigay waxqabadyadii u hirgalay Sanadkan gabo-gabada ah ee 2011 iyo Qorshayaasha ku talo gal ee u meel yaala sannadka cusub ee 2012.
XAQ AYUU U LEEYAHAY MAXAMED CUMAR CARTE INUU DHIIRIGELIYO HORUMARKA DALKA IYO DADKA!!!!
December 30, 2011	Waxaa layaab iyo fajicisaa eedeynta iyo sharaf xayuubinta lagu samaynaayo masuuliyiinta Urur Siyaasadeedka qaarkood sidda Gudoomiyaha Urur Siyaasadeedka DAMAL Mudane Maxamed Cumar Carte oo Warqadda Hargeysa ka soo baxda ee Jamhuuriya ku eedeysay inuu xidhiidh la lahaa qunsulka arimaha Somaliya ee fadhiisinkiisu yahay magaala madaxda wadanka Kenya ee Nairobi mr Bob Patterson. Hadaba sidda waraaqda […]
Ku simaha Duqa Caasimadda Hargeysa Oo Ka Jawaabay cabasho ka soo yeedhay dadweynaha xaafada 150-ka
Masar Oo Sheegtay In Socdaalka Weftiga Somaliland Qayb Ka Yahay Dardar Gelinta Siyaasadeeda Dibada
December 30, 2011	Qaahira (Somaliland.Org) – Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar ee Arrimaha Afrika, Muna Cumar ayaa carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay taageerida iyo dardar-gelinta xidhiidhka labada dhinac ah ee ay dawladda Masar la yeelanayso dhammaan dalalka Qaaradda Afrika, taas oo si cad ay u iftiiminayso siyaasadda cusub ee ay raacayso wasaaradda Arrimaha dibadda Masar, isla markaana ay daruuri tahay inay Masar si xawli ah dib ugula soo noqoto doorkeedii ay ku lahayd Afrika.
Wasiirka Caafimaadka Oo Ha’yad Sucuudi ah kala gudoomay deeq dawooyin ah
December 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka wasaarada Caafimaadka Md. Xuseen Muxumed Maxamed (Xoog) ayaa maanta ka gudoomay Deeq dawooyin ah xafiiska samofalka Madaxtooyada Somaliland, taasoo ka timi Hay’ada Al-Nahda,ee Dalka Sucuudiga. wasiirka ka Hadlay deeqdan dawooyinka ah waxa uu tilmaamay in deeqdan dawooyinka ah ay u qaybin doonaan todobo Cisbitaal oo ku kala yaala Gobolada Caasimada Iyo Gobolada […]
“Shiinuhu waxay danaynayaan Somaliland malaa dalkeena wax aynaan ku ogayn ayay ku og yihiin”
December 29, 2011	Wajaale(Somaliland.Org)- Guddoomiyaha xisbiga talladda haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii uu hoggaaminayay ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Wajaale , ka dib markii uu ka soo laabtay socdaal ay ku tageen dalka Shiinaha.
Wasiirka Qorshaynta oo ka hadlay Go’aan ay soo saareen gudiddii bilicda Caasimada Hargeysa
December 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddida Bilicda Caasimadda Hargeysa, ayaa muddo shan iyo afartan (45) maalmood ah dib u dhigay hawlgalkii lagu rari lahaa dadka ku ganacsada hareeraha waddooyinka suuqyada caasimadda dhex mara.
Guddoomiyaha Ururka JAMHUURIGA Oo soo dhaweeyay Go’aanka gudida diiwaan gelinta
December 29, 2011	“Urur ahaan waxaanu diyaar u nahay doorashada deegaanka waxna naga dhul yaalaan” Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Jamhuuriga Md. Cismaan Xasan Mirre, ayaa soo dhaweeyay ururadda siyaasadda ee ka soo gudbay wajigii hore ee diiwaan geiinta ururadda siyaasadda. Guddoomiyaha Jamhuuriga oo maanta u waramayay qaar ka mid ah saxaafadda ayaa bogaadiyay Gudidda diiwaan gelinta diiwaangelinta […]
Shabakadda Wikileaks oo Fashilisay Siro uu Maraykanka Siin Jiray Maxamed Cumar Carte
December 29, 2011	Nairobi (Wikileaks)- Shabakadda ku caan baxday faafinta siraha dawladdaha ee Wikileaks, ayaa fashilisay siro uu si qarsoodi ah wadanka Maraykanka u sii jiray Maxamed Cumar Carte oo shalay urur-siyaasadeed la yidhaahdo Damal kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa. News
Gudidda diiwaan gelinta oo soo bandhigay ururada ka soo gudbay wareegii hore ee diiwaan gelinta
December 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Gudidda Diiwaan gelinta Ururadda siyaasadda iyo ansixinta Axsaabta qaranka Md. Cabdirisaaq Jaamac Cumar (Ciyaale), ayaa soo bandhigay tiradda ururada siyaasadda ee is diiwaan geliyay isla markaana shubay 25 kun oo Dollar oo cashuur ah oo lagu soo rogay diiwaan gelinta ururadda cusub.
Weftigii Somaliland ee Qaahira ku sugnaa oo ka waramay Wasiirro iyo masuuliyiin ay la kulmeen
December 28, 2011	Qaahira (Somaliland.Org)- Weftigii wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ee uu weheliyay Wasiirka Madaxtooyada Md. Xirsi Cali X. Xasan, ayaa ka waramay kulamadii ay maalmihii la soo dhaafay Magaalada Qaahira ee dalka Masar kula kulmeen Wasiiro iyo masuuliyiin ka tirsan dawlada masaaridda. Sidaasna waxa lagu sheegay war saxaafadeed caawa ka soo baxay madaxtooyadda […]
Walxo qarxa oo lagu qabtay Hargeysa Iyo ciidanka qaranka oo ka hadlay
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Ciidanka qaranka ayaa soo bandhigay walxo ka mid ah waxyaabaha loo adeegsado qaraxyadda oo ay sheegeen in nin xidhnaa xijaabka haweenku uu si kadis ah xalay u tuuray markii uu arkay askari ka tirsan ciidanka Sahanka ee ciidanka qaranka. Hoggaanka Sahanka ee ciidanka qaranka Somaliland Maxamed Cabdi Cali “Waxaan diin sheegaynaa in xalay […]
Wasiirka Dib u dejinta oo ka waramay waxyaabihii u qabsoomay 2011-ka
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka wasaaradda Dib u Dejinta ee Somaliland Mudane Cabdirisaaq Cali Cismaan ayaa waxuu maanta ka Xog warramay waxqabadkii wasaaradda u hirgalay Sanadka 2011 ee Gabo gabada ah iyo Qorshaha ku tallo gal ee Sannadka cusub ee fooda inagu soo haya. Wasiirku waxa uu sheegay inuu Mas’uuliyada wasaaradan hayay Mudo Todoba Bilood ah isagoo xusay […]
“Shirkadii diida isku xidhka isgaadhsiinta liisanka uma cusboonaysiinayno”
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Dr. Axmed Xaashi Nuur (Oday) ayaa sheegay in shirkada diida sanadka fooda inagu soo haya barnaamijka isku xidhka khadka isgaadhsiinta aan loo cusub liisankeeda ganacsiga.
“Wasiirka maaliyadda waxba iilamuu hadhin ee waxa iga badbaadisay daacadnimadeyda”
December 28, 2011	News
Xeer-ilaaliyaha Guud oo shir u qabtay xeer ilaaliyeyaasha gobolada
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xeer-ilaaliyaha Guud ee Somaliland Md. Xasan Axmed Aadan, ayaa shalay shir uga furay hudheelka Imperial ee magaalada Hargeysa shir uga furay xeer-ilaaliyayaasha gobollada iyo kaaliyayaashooda. Shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ah, laguna gorfayn doono daraasad Xeer-ilaalinta Guud ka diyaarisay qaab-dhismeedka hawlmaalmeedka xeer-ilaalinta, iyada oo lagu soo sameeyey gobollada Somaliland, taas […]
Urur siyaasadeed la magac baxay Xaq-soor oo lagaga dhawaaqay Hargeysa
December 27, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Urur siyaasadeed cusub oo la magac baxay Xaqsoor, ayaa maanta lagaga dhawaaqay Huteelka Hadhwanaag ee magaaladda Hargeysa. Xafladii daah furka ururkan waxa ka soo qeyb galay galay Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID, Masuuliyiin ka socday xisbiga UDUB iyo ururadda siyaasadda ee UDHIS, RAYS, salaadiin, Xildhibaano iyo taageereyaal tiro badan. Guddoomiyaha ku meel […]
December 27, 2011	News
December 27, 2011	Hargeysa (Somaliland)- 178 qof oo ka kala socday, wasaaradaha, hay’adaha dawladda ayaa maanta u fadhiistay imtixaankii Qiimaynta Shaqaalaha dawladda. Gudoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Muxumud Aw cabdi uu imtixaanka ka hor la hadlay shaqaalahii gelayey imtixaanka, waxuuna u mahadnaqay mas’uuliyiinta hay’adda shaqaalaha ee hawsha sii waday mudadii uu dalka debadiisa ku maqnaa. Gudoomiyaha hay’adda shaqaalahu waxuu […]